TVစောင့်နတ်ကို ဆီမီးပူဇော်ခိုင်းဖူးလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » TVစောင့်နတ်ကို ဆီမီးပူဇော်ခိုင်းဖူးလား
Posted by etone on Oct 21, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Events/Fundraise, Short Story | 22 comments
ကလေးဘ၀ကတည်းက သီတင်းကျွတ်ဆိုလျှင် မီးထွန်းရမယ် ၊ ပွဲဈေးသွားရမယ် ၊ လူကြီးမိဘများကို ကန်တော့ကာ မုန့်ဖိုးတောင်းရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း … ကြီးလာတာနှင့်အမျှ သီတင်းကျွတ်ဧ။် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံနှင့် ခံယူချက်တို့ ကွဲပြားလာပါတယ် … ။
ကလေးတုန်းက မီးထွန်းတာကို အပျော်သက်သက်သာ ဖယောင်းတိုင်များ စိုက်ထူပြီး မီးညှိခဲ့သော်လည်း … ယခုတွင်တော့ ဆီမီးပူဇော်ခြင်းဟု နားလည်ခဲ့ပါတယ် ။ ပွဲဈေးသွားခြင်း ၊ အပျော်ပါးလျှောက်သွားခြင်းတို့ဟာလည်း အချိန်ကုန် အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ အမြင်မျိုး ဖြစ်လာခဲ့တယ် … ။ ဒါပြင် သက်ကြီးဝါကြီး လူကြီးမိဘများကို ကန်တော့ခြင်းဟာလည်း ယခင်ကလို မုန့်ဖိုးလိုချင်လို့မဟုတ်တော့ပဲ … မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချကာ အပြစ်များကို ကြေပါစေတော့ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရှိခိုးတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်ဟုပင် အမြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ် … ။ သီတင်းကျွတ်မှာ ကောင်းကင်က ပြန်ကြွလာမယ့် မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်သောအားဖြင့် ဆီမီးများ ၊ မီးရှုးမီးပန်းများ ၊ မီးပုံပျံများ လွင့်တင် ပူဇော်ကြသည့်အပြင် အိမ်တိုင်းတွင် လျှပ်စစ် ဆီမီး ၊ ဖယောင်းတိုင်မီးစသည်တို့ဖြင့် ပူဇော်ကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် … ။ သာမန်အားဖြင့် သတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ မရောက်မီ တစ်ရက်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့နှင့် … သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်တစ်ရက်တို့တွင် ဆီမီးပူဇော်ကြပါတယ်။ သုံးရက်စလုံး မီးပူဇော်သည့် အလေ့ထ တူပါသော်လည်း … နောက်ဆုံးရက်တွင် အိမ်ရှိ ၊ ရေတိုင်ကီ ၊ ဆန်အိုး ၊ဆီအိုး ၊ မီးဖို ၊ မြေကြီး ၊ မှန် ၊ အပ်ချုပ်စက် ၊ကြောင်အိမ် ၊ လူ့အသုံးဆောင် စသည်တို့တွင်ပါ ဖယောင်းဆီမီးများ တတိုင်စီထွန်းပြီး … ထို အရာများကို စောင့်ရှောက်သော နတ်များရှိလျှင် မြတ်စွာဘုရားအား ဆီမီပူဇော်နိုင်ရန်ထွန်းတယ်လို့ ပြောတာ မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ် … ။ တစ်ချို့တွေကလည်း တန်ဆောင်မုန်းရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှ ထွန်းတယ်လို့ပြောကြတယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ထွန်းကြတာပါပဲ … ။
ကျွန်မတို့အိမ်မှာလည်း အများနည်းတူ ဆီမီးပူဇော်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် … ဒါပေမယ့် ဥစ္စာခြောက်ကျွန်မကတော့ မီးအန္တရာယ်စိတ်ပူ တတ်လွန်းလို့ မီးထွန်းထားတဲ့နေရာမှန်သမျှ ငါးမိနစ်တကြိမ်လိုက်ကြည့်ပါတယ် … ဖယောင်းတိုင်ကုန်မှပဲ စိတ်အေးရပါတော့တယ် … ။ထိုစဉ် လမ်းထဲကလူများ ညှော်နံ့ရတယ်လို့ .. လိုက်အော်သံကြားရပါတယ် … ကိုယ့်ဆီမီး ကိုယ်ပြန်စစ်ဖို့ နှိုးဆော်တာပါ … ။ ရွာဆော်အဖွဲ့ကနေ … အသံပြဲကြီးနဲ့ ညှော်နံ့ ရပါတယ်လို့ တစာစာ အော်တာကြောင့် နဂိုငြိမ်းပြီးသား မီးကိုတောင်သေချာအောင် ကျွန်မပြန်စစ်လိုက်သေးတယ် … ကျွန်မတို့အိမ်ကတော့ ညှော်နံ့ထွက်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ စိတ်ချလက်ချ ဂျာနယ်တစောင်ထိုင်ဖက်နေပါတယ် …. ။ ခဏကြာတော့ … ဖုန်းခနဲဆို ပေါက်ကွဲသံနဲ့အတူ … လူတွေ အားလုံး လမ်းထဲရှိ ထိုပေါက်ကွဲသံကြားသော အိမ်သို့ အပြေးလွှားသွားကြပါတော့တယ် … ထိုလူအုပ်ကြားမှာ ကျွန်မလည်း .. တွန်းကာ တိုက်ကာ လိုက်စပ်စုဖြစ်ပါသေးတယ် … ။
မြင်ရတဲ့ အနေထားက ယုံကြည်စရာမဟုတ်ပေမယ့် တကယ့်ကိုအူလည်လည် လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဂရုဏာ သက်ရမလို … အော်ရယ်ရမလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် … ။ လောင်ကျွမ်းနေသော အရာမှာ တခြားအရာဝတ္တုမဟုတ်ပါ … 21 လက်မ တီဗီကြီးသာဖြစ်ပါတယ် … ။ တစ်ရပ်ကွက်လုံးက အူကြောင်ကြောင် လင်မယားဟု သမုတ်ထားခဲ့သူ … အိမ်ရှင်ယောကျာ်းဖြစ်သူက ဆန်ပုံး ၊ဆီပုံး ၊ စားပွဲ၊ ခုံ၊လှေခါး စသည်တို့တွင် ဆီမီးပူဇော်ခြင်းကိုပင် အားမရပဲ တီဗွီကြီးပေါ်ကိုပါ … ဘာအခံမှ မပါပဲ မီးပူဇော်ပြီး အိမ်ပြင်ထွက် လေရွှီးကောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ် … ။ လူညီညီဖြင့် ငြိမ်းသပ်မှုကြောင့် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပါနဲ့ … ။
တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဘယ်သူမှ တီဗွီပေါ် တင်ထွန်းတာ မတွေ့ရပဲ … အူလည်လည်နိုင်တဲ့ အဖြစ်ကြောင့် … သူတပါးစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်တွင် …. အော်ရယ်သူများသာ များခဲ့ပါတယ် … ။ တီဗွီနဲ့ ဆက်စပ်နေသော သစ်သား စင်အပါဝင် အနီးနား ပစ္စည်းများပါ မီးဟပ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ် ….. ။ ဤမျှလောက်အောင် အူလည်လည်နိုင်သော လူကို တွေ့ရခြင်းမှာ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ပထမဆုံး အကြိမ်ပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်
နောက်ပို့စ်တစ်ခုတွင်လည်း … အူလည်လည်နိုင်သော လင်မယားဧ။် ကိုယ်ချင်းမစာမှု ကျေးဇူးကန်းမှုများကို ရေးပါဦးမယ် ။
ရွာတော်ရှင် မ ဆီမှာလဲ
ရွာတော်ရှင်မကိုတော့ ဆီးမီးမကပ်ဘူး ..ယတြာပဲပြေးချေရမယ်ကိုပေရေ… ။ etone အလကားနေရင်း တိုင်ပတ်နေပါတယ် … အိုးစွပ်ခွက်စွပ်လည်း မစားရပါဘူး …
ကျုပ် မလဲ ဘုမသိဘမသိ နဲ့ 
အိမ်လိပ်စာ လာမေးနေလို့ 
သူမရှိတုန်း သူ့ အကြောင်းပြောရတာ
မီးပျက်တုန်းက ထွန်းခဲ့တဲ့ ဖယောင်းတိုင် အတိုလေးနဲ့ 
အိမ်လိပ်စာ မေးတာ ၀ါးရင်းဒုတ် ၏အစိမ်း အလတ်လေးတွေ ရထားလို့ လာပို့ချင်လို့.. တစ်တောင်သာသာ ဆို အလောတော်ပဲ တုံးနဲ့ တူတူ လာခဲ့မယ်။
မောင်ပေ က သွားကျဲတယ် ထင်တယ်.. ပါးစပ်ထဲက လေတွေ သွားကြားထဲက ဟိုထွက် ဒီထွက်.. သတင်းကတော့ တိတိကျကျ ရနေတယ်။ အခုလေးတင် ဘီလူး ကို ဖယောင်းတိုင် မီးညှိပြီး သွားကျဲမကျဲ စစ်ဆေးကြည့်တာ အမွေးနည်းနည်း မီးလောင်သွားတယ်။ (နှုတ်ခမ်းမွေး) မယုံရင် ကိုယ်တိုင်သာ မေးကြည့်ပေတော့။
ကိုဘီလူးက နှုတ်ခမ်းမွှေးမီးလောင်ရင်း ပါးသိုင်းမွှေးကိုပါ ကူးသွားလို့ စပ်ဖြီးဖြီး ဖြစ်နေပါသတဲ့ ရွာတော်ရှင်မရေ
နှစ်ယောက်ထဲ နားလည်နိုင်တဲ့ စကားတွေ မပြောကြနဲ့လေ…။ ရွာတော်ရှင်မ၊ အိုးစွတ်ခွက်စွတ်၊ အိမ်လိပ်ရော စုံနေတာပဲ။ ခင်ဗျားတို့က ထောက်လှမ်းရေးတွေလား ယူဂျီတွေလာ….။ ရွာကို ဒုက္ခလာမပေးကြပါနဲ့…။ :mad:
TV ကိုပါ ဆီမီးပူဇော်တယ်လို့ ကြား ကြားဖူးပေါင်တော် ……
TV ကို ဆီမီးပူဇော်တာတော့ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး
ကျောက်ပြင်တို့ နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်တို့ လှေကားတို့ကို ပူဇော်တာတို့တော့
တွေ့ဖူးတယ် ။ နွယ်ပင်ကတော့ အဲလိုတွေ့ရင် မီးလောင်မှာဆိုးလို့
တွေ့တဲ့ နေရာမြှ ဘယ်သူမှမသိအောင် ညှိမ်းလိုက်တာပဲ ….
တို့တွေတော့ ဘုရားစင်နဲ့ ၀ရံတာမှပဲ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းလိုက်တယ်
ကြောင်အိမ်မှာ၊ ဆန်ပုံးပေါ်မှာ၊ အစုံပါပဲ
တီဗွီမှာမထွန်းဖူးဘူး၊ အဲ….ဆီပုံးမှာလည်း မထွန်းဖူးဘူး (အန္တရာယ်လည်း များပါ့)
သီတင်းကျွတ်မှာ မီးထွန်းတာက နတ်ကို ပူဇော်တာလား ဒါဆို …………………
ဟုတ်ဘူးလေ .. အဘနီရဲ့ …
မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွလာလျှင် သူတို့ ပူဇော်လို့ရအောင် …..ရှေးလူကြီးတွေက မျက်နှာလိုမျက်နှာရ … ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ ကိုယ်စားထွန်းပေးတာ …သူတို့ပူဇော်ဖို့ထွန်းပေးတာ ..အဲ့သဘောပါ .. နတ်ကိုပူဇော်တာမဟုတ်ဘူး ။ ဆန်ပုန်း ၊ဆီပုန်း ၊… စသည်တို့ မှာ နတ်ရှိတယ် လို့ပြောတာပဲ … ။
ဆန်းအို ဒန်အိုး ရေတိုင်ကီတွေအပြင် ငရုတ်ဆုံတွေမှာပါ
အမေက ထွန်းခိုင်းတာကိုဗျ ..အခုတော့သိပြီ။။
ရှေးအယူဆွဲတွေက ဘယ်ဂျန်နရေးရှင်းထိ ကပ်ပါသွားမလဲ မသိဘူး … ။
တကယ်တော့… ဖယောင်းတိုင်မီးတွေကြောင့် မီးဘေး အန္တရာယ်တောင် စိတ်ပူနေရသေးတယ်လေ …။
ကွယ် ။ သည်လူနှယ် ဟင်းဖုန်း နတ်ကိုပါ ရောပြီး ပူဇော်ပေါ့ ။
ဟုတ်ပါ့ ဘကြီးတော်ရေ … နောက်နှစ်ကျလျှင် ကျွန်မကြပ်လိုက်ဦးမယ်
ကံကောင်းလို့ တစ်ရက်ကွက်လုံး မပြောင်တာ
ထွန်းချင်လဲ အောက်က ခွက်ခံပြီးထွန်းပါတော့လားလို့ ..
“ဘီလူးကြီး”ogre ရေ့ ငရုပ်ဆုံပေါ် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းတာ ဘာလဲ သိရဲ့လား ………အာာာာ သွားပါပြီ…။ စိတ်နောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ….။ ပြန်ပြီး ဆန်းစစ် သင့်နေပြီနော့….။
တကယ်ကတော့ သီတင်းကျွတ်မှာ မီးထွန်းရတာ ပျော်စရာကောင်းပြီး အရှိန်ရနေလို့ ကြံဖန်အကြောင်းပြပြီး လျှောက်ထွန်းတယ်ထင်ပါရဲ့။
ရိုးရာ မြန်မာအယူအရတော့ အိမ်တခုမှာ နတ်ရှိနိုင်မယ့်နေရာ (နတ်စောင့်နိုင်မယ့်နေရာ) တွေက –
အိမ်ဥယာဉ်တိုင် (အိမ်တိုင်ထူတဲကအခါ ပထမဆုံးထူရတဲ့ ခေါင်းရင်းတိုင်။ မင်းမဟာဂီရိနဲ့ ရွှေနဘေကို အဲဒီတိုင်မှာ အိမ်တွင်းအုန်းဆွဲပြီး ပူဇော်တာ) – ဆိုပြီး ၄ နေရာရှိပါတယ်။
(တကယ်တော့ ဘယ်နတ်မှ အားအားယားယားလာမစောင့်လောက်ပါဘူး။ လခလဲပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့)
အိမ်နောက်ဖေး ကပြင်(မီးဖိုချောင်)ရဲ့ အပြင်ဘက်/အောက်ဘက်
ခြံ အနောက်မြောက်ဒေါင့်နေရာ ဆိုပြီး ၃ နေရာရှိပါတယ်။
အရင်လူကြီးတွေက ဟုတ်သော်ရှိမဟုတ်သော်ရှိ ဖယောင်းတိုင်လေးပေးပြီး လှူစေတာပါ။
ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်ကတော့ မီးထွန်းရတာပျော်လို့ တွေ့သမျှလျှောက်ထွန်းတာ-
ကျောက်ပြင်ရော သနပ်ခါးတုံးရော ရေအိုးရေစည်ရော မီးဖိုရော ထမင်းအိုးရော-
ကျုပ်ဆို စက်ဘီးမှာတောင် ကယ်ရီယာခုံမှာသွားထွန်းတယ်။
ကောင်းကျိုးက ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ဆိုးကျိုးက ဖယောင်းစက်တွေ ပေပွညစ်ပတ်ပါတယ်။ မီးလောင်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါတွေ နောက်မျိုးဆက်ကို သယ်မသွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကျမလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ (၅)နှစ်လောက် အထိ အကျင့်ပါပြီးထွန်းခဲ့တယ်။
မီးရေးထင်းရေး ကြောက်ရဖန်များလာတော့ နွယ်ပင်ပြောသလိုပါပဲ
ထွန်းတုန်းကလည်း အိတုန်လေးရဲ့  ဇာတ်လိုက်လင်မယားလိုတော့
တီဗွီနားတို့ ဆီပုံး နားတို့မထွန်းခဲ့ပါဘူး။
ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည်နဲ့ သားတို့ ရဲ့  Memorial အခန်းထဲမှာတော့
သီတင်းကျွတ်ပြီ၊ ဘုရားပူဇော်ကြ၊ ဆိုပြီး ဆီမီးတစ်တိုင်စီ ထွန်းပေးလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရိုးရာ ဓလေ့ ထုံးစံ ဆိုတာ ဖျောက်ရခက် ပြင်ရခက်ပါတယ်။
ဘယ်သူ့မှ မထိခိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်လုပ်ချင်ရင်လုပ်.။
သူလည်း ကိုးရီးယား မင်းသမီး လေးတွေကို မီးပူဇော် ချင်တာဖြစ်မယ်